eurgbp | Ibhulogi ye-FXCC
Okuthunyelwe Kwamakwe 'eurgbp'
I-EUR / GBP iyinqoba kwiSuku Lwabhange Lwamanye amazwe
Jul 6, 12 • Ukubuka kwe-5114 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off I-EUR / GBP iyinqobe ngosuku lweBhange Lwamanye amazwe
Izolo kufanele ukuthi ibizwe ngokuthi iSpanish Central Bank Day, ne-Peoples Bank yaseChina, i-European Central Bank kanye neBhange laseNgilandi. I-EUR / GBP idayise kakhulu ekuhambeni kwezinqumo zenqubomgomo ye-BOE kanye ne-...
I-EUR / GBP ilungiselela iMpi yeBhange Elikhulu
Jul 4, 12 • Ukubuka kwe-3223 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off Ku-EUR / GBP ilungiselela iMpi yeBhange Elikhulu
Izolo, ukuhweba ngezinga lokungena kwe-EUR / GBP kuvinjelwe ebangeni elide elide lokudayisa kulo lonke i-0.8020 pivot. Ukulungiswa kwe-euro kwaMsombuluko kuye kwaqeda, kodwa kwakungenaso isifiso / izindaba zokuthumela imali ephezulu. Idatha yase-UK ayinikeziwe ...
Jun 28, 12 • Ukubuka kwe-5290 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off Ku-GBP Akukwenzeki Ukuphikisa I-Euro
I-EUR / GBP engenakwenzeka
Jun 27, 12 • Ukubuka kwe-2102 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off kwi-EUR / GBP engenakwenzeka
Izolo, i-sterling yayimemezele kahle, njengoba nje izindaba ezigeleza ukusuka e-UK ayisekeli imali. Ukungaqiniseki emphumweni wendikimba ye-EU kwakuyisici esibalulekile sokuhweba emazingeni amakhulu e-euro. Noma kunjalo, i-sterling yayingu-outperformer. I-EUR / GBP ...
I-EUR / GBP ne-BOE ne-Greeks namaSpain
Jun 15, 12 • Ukubuka kwe-4698 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off kwi-EUR / GBP ne-BOE kanye namaGreki namaSpanish
Ngemuva kokushiya okukhulu ngoLwesibili nangoLwesithathu, isibalo se-EUR / GBP sithole uhlobo oluthile lokulingana. Lo mbhangqwana uhlezi izolo ngephethini lokuhweba elihlangene eduze nesithombe esikhulu se-0.8100. Kwakungencane kakhulu endleleni yezindaba ezinzima ukuphoqa ...
Ukubuka Ku-EUR / GBP ngaphambi kwesitatimende se-BoE
Jun 7, 12 • Ukubuka kwe-1972 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off Ku-Look Ku-EUR / GBP ngaphambi kwesitatimende se-BoE
NgoLwesithathu, ukuhweba kwi-EUR / GBP isilinganiso sezinga eliphezulu kakhulu lijoyine i-intraday yokuhweba iphethini ye-pair / EUR pair. I-EUR / GBP igxile eduze nendawo ye-0.81 ngesikhathi sesimiso sasekuseni. Lo mbhangqwana wehlelwe ukungena esinqumweni senqubomgomo ye-ECB futhi ekuqaleni kwezindaba ...
Ukubheka Okuyisisekelo Nezobuchwepheshe Bheka i-EUR / GBP
Jun 5, 12 • Ukubuka kwe-4762 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off Ku-Fundamental and Technical Bheka i-EUR / GBP
NgoMsombuluko, izimakethe zaseLondon zavalwa. Kodwa-ke, ngisho nangaphandle kwezindaba zezomnotho zase-UK ezikrinini, ukuhweba ngezinga lokungena kwe-EUR / GBP kwaba mnandi kakhulu. Lo mbhangqwana wabonakala endaweni ephakeme ye-0.80 ngesikhathi sesimiso saseYurophu. Umlenze omusha e-euro ...
I-EUR / GBP Ukukhuluma Ngekhono
May 31, 12 • Imibono ye-906 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Amazwana Off kwi-EUR / GBP Ukukhuluma Ngokusebenzayo
Leli sonto, ukuhweba kwezinga le-EUR / GBP lakhiwe futhi kumibandela emakethe emincane. Iphethini lokuhweba le-intra-day lalihle kakhulu noma elifana nalokho okwenzeke ku-pair / headline ye-headline ye-EUR / USD. I-EUR / GBP ifinyelele phezulu kwe-intraday endaweni ye-0.8035 / 40. Noma kunjalo, i ...
May 25, 12 • Imibono ye-5589 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ngombono Wanamuhla We-EUR / GBP
I-EUR / GBP iphoqa phansi
Apr 23, 12 • Ukubukwa kwe-5055 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off Ku-EUR / GBP Ikhupha Phansi
Ngasekupheleni kwesonto eledlule i-euro / idilogithi ibanjwe ngaphansi kwe-0.8222 ibanga langaphambilini eliphansi. Ukuthengiswa kwe-UK okuthengisiwe kwabikwa okuqinile kodwa lokhu kwakungeke kwenele ukucindezela okuyingxenye yokuthola imali eqhubekayo ngokumelene nemali eyodwa. I-EUR / GBP ibambelele eceleni ...